YEYINTNGE(CANADA): Thursday, June 14
တို့လူမျိုးများ နိုးကြားလို့ အိန္ဒိယကဲ့သို့ စည်းရိုးခတ်စို့
မြန်မာပြည်ခြံစည်းရိုး အိန္ဒိယ နိုင်ငံကဲ့သို့ လုပ်သင့်သည်
by Qing Minya on Friday, 23 March 2012 at 13:41 ·
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အာရှတိုက်၏ လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး တောင်အာရှဒေသအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ၄င်းနိုင်ငံသည် အခြားသော နိုင်ငံများနှင့် ကုန်းပိုင်းတွင် ၁၅၁၀၆ ကီလိုမီတာခန့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး ကမ်းရိုးတန်းပိုင်းတွင် ၇၅၁၇ ကီလိုမီတာခန့် ဆက်စပ်နေပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဆက်စပ်လျက်ရှိသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ကီလိုမီတာ ၄၀၉၇ ခန့်၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကီလိုမီတာ ၃၄၈၈ ခန့် ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် ကီလိုမီတာ ၃၃၂၃ ခန့်၊ နီပေါနိုင်ငံနှင့် ကီလိုမီတာ ၁၇၅၁ ခန့် ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကီလိုမီတာ ၁၆၄၃ ခန့် ၊ ဘူတန်နှင့်မူ ၆၉၉ ကီလိုမီတာ ထိစပ်လျက်ရှိပြီး အာဖကန်နစ်စတန်နိုင်ငံနှင့်လည်း ၁၀၆ ကီလိုမီတာ နယ်မြေထိစပ်လျက် ရှိပါသည်။
နယ်စပ်၊ နယ်ခြားဒေသကို စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးသည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် လွန်စွာ အရေးပါအရာရောက်သည်ဟု အိန္ဒိယအစိုးရမှ ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုသို့စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင်လည်း စီးပွားရေး၊ စီမံခန့် ခွဲရေး၊ သံတမန်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာ အစရှိသော အဖက်ဖက်သော ရှုထောင့်နယ်ပယ်မျိုးစုံမှ အခက်အခဲအဖုံဖုံကို အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် ရင်ဆိုင်ရပါသည်။
၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နယ်စပ်ဒေသ စီမံခန့် ခွဲရေး ဌာနတစ်ခု ဖွဲ့စည်း၍ ၄င်း၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်းပိုင်းနှင့် ကမ်းရိုးတန်းနယ်ခြားဒေသများကို အထူးဂရုပြု၍ စီမံအုပ်ချုပ်ရန် စီမံကိန်းများ ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော စီမံကိန်းများမှာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် နယ်စောင့် တပ်များ ထားရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်စေရန် လမ်းသစ်များ ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ နယ်စပ်တွင် ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းနှင့် မီးမောင်းများ တပ်ဆင်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုးများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းသို့ အများဆုံးခိုးဝင်သော လူမျိုးဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည် အိန္ဒိယပြည်သို့ နယ်စပ်မှတဆင့် တရားမဝင် ခိုးဝင်၍ အိန္ဒိယပြည်တွင်းတွင် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေလုပ်ကြသည်။ အချို့ မှာမူ ကျွဲနွား၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လက်နက်များ တရားမဝင် မှောင်ခိုကုန်ကူးကြသည်။ အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလား နယ်နမိတ် ထိစပ်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
- West Bengla (22167 km)
- Assam (263 km)
- Meghalaya (443 km)
- Tripura (856 km)
- Mizoram (318 km)
အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလားနယ်စပ်သည် မြေပြန့် ပိုင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဘင်္ဂလားတို့၏ တရားမဝင် စိမ့်ဝင်နေထိုင်မှု၊ ၄င်းတို့၏ တရားဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အိန္ဒိယအစိုးရမှ အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလားနယ်စပ် တလျှောက် ခြံစည်းရိုးကာရံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင်အဆိုပါ ခြံစည်းရိုးကို အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန် သန်း၆၀၀ခန့် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ခြံစည်းရိုးသည် ကီလိုမီတာ ၃၂၈၇ ခန့် ရှည်လျားပြီး ၃ မီတာမြင့်သည်ဟု သိရပါသည်။
ထိုမျှမက အိန္ဒိယ နယ်စပ်လုံခြုံရေးအင်အားစုမှလည်း Shoot-At-Sight Policy ဟူသော တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူများအား အမေးအမြန်းမရှိ၊ တွေ့ရာအရပ်တွင် ပစ်ခွင့်ရှိသော လမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အိန္ဒိယသို့ခိုးဝင်ရန် ကြိုးစားသော ဘင်ဂလီများ ရာနှင့်ချီ၍ နယ်စပ်တပ်များ၏ သေနတ်ဖျားတွင် အသက်ပျောက်ကြသည်။ Nazrul Islam ဆိုသော ဘင်္ဂလီမှ သူ၏ အတွေ့ အကြုံကို ဤသို့ ပြောပြခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ မနက်စောစော ၃ နာရီလောက်မှာ အိန္ဒိယမှ နွားတွေ ခိုးထုတ်လာပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကို ပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာ နယ်စောင့်တပ်တွေနဲ့ တွေ့ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို မြင်တာနဲ့ အစစ်အဆေး အမေးအမြန်း မရှိပဲ တခါတည်း ပစ်တော့တာပါပဲ။"
အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွင် Nazrul Islam ၏လက်တွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ၏ Shoot-At-Sight policy အား ပြည်ပ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ကြသည်။ ၁၀ နှစ်အတွင်း နယ်ခြားတွင် အသက်ပျောက်သူ ၁၀၀၀ ကျော် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အများစုမှာ ဘင်္ဂလားလူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ ပြည်ပလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းစာများမှ အိန္ဒိယ နယ်စောင့်တပ်သည် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများကို ရက်ရက်စက်စက် အကြောင်းမဲ့ ပစ်သတ်သည်ဟု ဝေဖန်ကြသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျင်း၍ အိန္ဒိယ နယ်စပ်လုံခြုံရေး အဖွဲ့ (Border Security Force) မှ အကြီးအကဲတစ်ဦး ဖြစ်သူ Raman Srivastava က ပြန်လည်ချေပ ပြောဆိုခဲ့ရာတွင်
"ဒီလိုနယ်စပ်ကို ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစားရင် အပစ်ခံရတဲ့သူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းစရာ မရှိပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အိန္ဒိယကို တရားမဝင် ခိုးဝင်လာတဲ့ ဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟုပြောဆိုသွားပါသည်။
လူအချင်းချင်း စာနာမိသော်လည်း တဖက်မှ ပြန်ကြည့်လျှင် အိန္ဒိယအစိုးရသည် မိမိနိုင်ငံ လုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တွေးမိသည်။ ကျွန်မတို့ ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ၂၅၇ ကီလိုမီတာခန့် ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်။ အိန္ဒိယကဲ့သို့ နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးများကို ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် မားမား မတ်မတ် မြင်ချင်စိတ်များ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/14/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ယနေ့ည ၁ နာရီ ၆ မိနစ်ခန့်တွင် စစ်တွေမြို့ ရခိုင်လူမျိုးများ နေထိုင်သည့် မြို့သူကြီးရပ်ကွက်ကို ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက စက်လှေဖြင့်လာရောက်မီးရှိုိ့သွားသည့်အတွက် အိမ်ခြေအများအပြား လောင်းကျွမ်းလျှက်ရှိသည်ဟု စစ်တွေမြို့ခံများက ဖုန်းဆက်ပြောကြားချက်အရသိရှိရသည်။ပြီးခဲ့သည့်ညက လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်လျှက်ရှိသည့် ရပ်ကွက်သား အများအပြားဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ၀င်ရောက်မီးရှို့ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင့် ဒေသခံများကပြောဆိုသည်။
"မီးလောင်နေတာက တစ်နာရီလောက်ရှိသွားပြီး ။ အခုထိတော့ မီးမငြိမ်းသေးဘူး။ မိုးကလည်း တအားရွာနေတယ်"ဟု စစ်တွေမြို့ ကမ်းနား မြို့သူကြီးရပ်ကွက်မီးလောင်နေသည့် နေရာသို့ ရောက်ရှိနေသော7Day News Journal မှ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ကို တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
စစ်တွေမြို့နယ် အိမ်ခြေ နှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ( 2012-06-14 နေ့ စစ်တွေမြို့ လ.၀.က ရုံးမှ စာရင်း )
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/14/20120အကြံပြုခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂါလီများ၏ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
အမှတ်(၂/၂/၂၃၂) မဟော်ဂနီလမ်း ၊ ထောက်ကြံ့တိုးချဲ့၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း - ၀၉၈၆၁၀၇၁၉
၂။ ဤဖြစ်ရပ်သည် မြန်မာပြည်တွင် မူလနေ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သော အခြားတိုင်းတပါးမှ လူမျိုး ကွဲများက မြန်မာပြည်အတွင်းသို့ တဖြည်းဖြည်း စိမ့်ဝင်နေထိုင်လာရာမှ နယ်မြေအပိုင်စိုးမိုးရေးအတွက် ကျူးကျော်မှုကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် အကြမ်းဖက်မှု ပုံစံဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာရာမှ ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု မှတ်ယူ ပါသည်။ အဆိုပါ လူမျိုးကွဲ ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများက မူလနေတိုင်းရင်းသားများအပေါ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ပြီး မနေထိုင်ဝံ့အောင် မောင်းထုတ်သည့် အပြုအမူများဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား များ၏အိုး အိမ်များ ကိုမီးရှို့ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နေသည်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတို့က သိရှိမှတ်သား စေလိုပါသည်။
၃။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်သူအဖြစ်သို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များနှင့် ကုလသမဂ္ဂက မှတ်ယူလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတွန်းပို့နေသော လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်နေသည် ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ အရပ်သား အသွင်ဆောင်ထားသော ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား လုပ်ကိုင်ရခက်ခဲစေရန် အကွက်ချဖန်တီးမှုများ ထိုဘင်္ဂါလီများ၏ ၀ါဒဖြန့်သတင်းဌာန များမှ သတင်းအမှားများ ဖြန့်ဝေနေခြင်းကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မည်သည့်တိုင်းပြည်ပင်ဖြစ်စေ ဤကဲ့သို့ သော ကျူးကျော်ရန်စမှုကို လက်ပိုက်ကြည့်နေပါက နယ်မြေဆုံးရှုံးခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာ သော အရေးယူမှုများ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုများ ပြုလုပ်ကြရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်သည့် အားလျှော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တိုင်းတပါးကျူးကျော်မှုရန်ကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီမှ ထောက်ခံပါသည်။
၄။ အဆိုပါလူမျိုးကွဲ တိုင်းတပါးသားများ စိမ့်ဝင်နေထိုင်မှုကိုလည်း အမြန်ဆုံးစိစစ်ပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါ ရန်နှင့် တိုင်းတပါးသားများ စိမ့်ဝင်နေထိုင်မှုအတွက် တာဝန်ပေါ့လျော့သူများ လုပ်ကိုင်စီမံမှု ညံ့ဖျင်းသူများကို လည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် သားများ၏ ဘ၀လုံခြုံရေးကို ရေရှည်အာမခံနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း လူအများသိရှိနိုင်စေရန် ပြည် ထောင်စုအစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါရန်လည်း တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
၅။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကနဦးနေထိုင်ကြကုန်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အပေါင်းတို့အားလည်း အထူး အသိပေးလိုသည်မှာ ဌာနေအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရပြီးသော ဌာနေများ စာရင်းတွင် ပါဝင်ပြီးဖြစ်သဖြင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုသာ အခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း နှင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သစ္စာစောင့်သိရမည် ဖြစ်ပေသည်။ သို့ပါသောကြောင့် နိုင်ငံခြားမှ ၀င်ရောက်လာသူ များအပေါ် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတူဟူ၍ ဘက်လိုက် လိုက်ပါပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုမိကြစေ ရန် အထူးအသိပေးအပ်ပါသည်။
၆။ ပြည်တွင်းရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်မဟုတ်သော အခြားဘာသာများဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များသည်လည်း ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုမူဘဲ နိုင်ငံ သားအမြင်ဖြင့်သာ စဉ်းစားလုပ်ကိုင်ကြပါရန် လေးနက်စွာ အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၇။ တိုင်းတပါးမှ ၀င်ရောက်လာသူများကိုမူ ဘာသာတူခြင်း/ မတူခြင်း၊ လူမျိုးတူခြင်း/ မတူခြင်း အပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြားရမည်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း/ မဖြစ်ခြင်း ကိုသာ အခြေခံပြီး ပြည်တွင်းဥပဒေများနှင့် အညီ စည်းကမ်းနည်းလမ်းတကျ လုပ်ဆောင်ကြပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးတွင် ဖြစ်စေ ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြား တွင်ဖြစ်စေ မည်သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု/ နယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု ကိုမဆို မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ မှ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ရှုံချပါကြောင်း ကြေညာ အပ်ပါသည်။
by Yangon Press International on Tuesday, June 12, 2012 at 5:03am · ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၂၊ YPI
ဆေးရုံကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ဒေသခံအခေါ် အင်တာနက် ရုံး
အခြေအနေအေးချမ်းစေပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ဟု နှစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များကို တိုက်တွန်း
ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၂၊ YPI
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ မစ္စတာ မိုက်ကယ် သာစတန်သည် မွတ်ဆလင်နှင့် ရခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် သီးခြားစီ ယနေ့ တွေ့ဆုံပြီး လတ်တလော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် မငြိမ်မသက်မှုများ အေးချမ်းသွားစေရန် တိုက်တွန်းကာ ယင်းဖြစ်ရပ်များအပေါ် စိုးရိမ်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ဆုံမှု အပြီး ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်အရ သိရှိရသည်။
ယခုလောလောဆယ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းတိုင်း အေးချမ်းစွာရှိဖို့ လိုအပ်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်လည်း လိုအပ်လျှက်ရှိကာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရာ ပထမဦးဆုံး အနေဖြင့် အခြေအနေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှ ဖြစ်နိုင်မည် ဟု သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက ပြောဆိုခဲ့သည်။
သံရုံးယာယီတာဝန်ခံနှင့် ယနေ့ တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်အမျိုးသားများ ဘက်မှ ရခိုင်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် ဦးသိန်းရွှေ ၊ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မော်လ၀ီ အဖွဲ့ဋ္ဌာနချုပ်၊ အိုလမာ အစ္စလာမ့်သာသနာ ပညာရှင်များ အဖွဲ့ချုပ်၊ အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာကောင်စီဋ္ဌာနချုပ်၊ မြန်မာမွတ်ဆလင် လူငယ်များ (ဘာသာရေး)အဖွဲ့ နှင့် မြန်မာမူဆလင်အမျိုးသားရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်တို့မှ ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအများအပြားမှာ ယခုမငြိမ်မသက်မှုကြောင့် ဒုက္ခခံစားနေကြရကြောင်း ပြည်သူလူထု၏ မည်သည့် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မှုမဆို ငြိမ်းချမ်းစွာပင် ဖြစ်သင့်ကြောင်းလည်း သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး မြန်ဆန်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး တစ်ရပ်ကို လုပ်ဆောင်သွားရန် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အားပေးတိုက်တွန်းကြောင်းလည်း မစ္စတာမိုက်ကယ် သာစတန်က ဖေါ်ပြပြောဆိုထားသည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် မငြိမ်မသက်မှုကြောင့် ဒုက္ခခံစားနေရသူများအား အကူအညီပေးအပ်ဖို့ ယခုရက်ပိုင်း နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိစဉ် အမေရိကန် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက မြန်မာအစိုးရအာဏာပိုင်များအား ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်းလည်း ကြေညာချက် အရ သိရှိရသည်။
ယခင်သီတင်းပတ် သောကြာနေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မငြိမ်မသက်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနေဖြင့် ကြေညာချက် ၃စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပထမကြေညာချက်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဋ္ဌာနမှ ဗစ်တိုးရီးယား နူးလန်က ထုတ်ပြန်ပြီး ဒုတိယကြေညာချက်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်အပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ယခုကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လတ်တလော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မငြိမ်မသက်မှုများကြောင့် ယမန်နေ့ထိ သေဆုံးသူ ၂၉ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၃၈ ဦး၊ လူနေနအိမ် ၂၅၂၈ လုံး၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၉ ကျောင်း၊ ဗလီ ၇ လုံး နှင့် စာသင်ကျောင်း `၆ ကျောင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ယနေ့ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပထမဆုံးလာတဲ့ မေးခွန်းကတော့ အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့မေးခွန်းပါပဲ... ဒီလိုဖြေပါတယ်....
"Of course I am concerned as I think everybody else in Burma is about the present, with regards to the present situation in Rokhine. I think the most important lesson that we need to learn from it is the need of the rule of law. We have said again and again, my party the National League for Democracy that rule of law is essential if we are to put an end to all conflicts within the country. Everybody must have access to the protection of the law and of course they also haveaduty to abide by the laws of the land. So without rule of law, such communal strife will only continue and the present situation will have to be handled with delicacy and sensitivity and we need the cooperation of all peoples concerned to regain the peace that we want for our country."
ဘင်္ဂလီကိစ္စအမေစုဖြေတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မှာလာဒ်စားတဲ့သူတွေအရေးယူခံရတဲ့အချိန်။ ဟိုဘူးသီးတောင်မှာတာဝန်ယူတဲ့ဗိုလ်မှုးချူပ်..သိန်းသောင်းချီချမ်းသာသွားတာလေးကိစ္စ.... လုပ်ပါအုံး..အခုမှဈေးကျသွားတာ..အရင်ကဘင်္ဂလီတယောက်၃၀ကနေ၁၀၀ကြားမှတ်ပုံတင်ရအပြီးဈေးပေါက်တယ်။ ဘင်္ဂလီကိစ္စအဓိကကြိုးကိုင်ခဲ့တာဦးအောင်သောင်းနဲ့ ဦးမောင်ဦးပါ၊ဦးသိန်းစိန်လည်းသိသလိုနိုင်ငံရေးသမားကြီး အချို့လည်းသိပါတယ်။အောက်လမ်းနည်းသုံးကြည့်တာပါ။ နာမည်ကြီးအသံလွှင့်ဌာနတခုကမကြာခင်ဖေါ်ထုတ်ပေးပါ လိမ့်မယ်။တခုပဲပြောချင်တယ်၊အာဏာရဖို့ အသက်တွေကို မစတေးပါနဲ့၊။ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံကြပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ Swiss President Eveline Widmer-Schlump တွေ့ဆုံ
DVB News Mirror and Rhythm ဆွစ် မြို့တော်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ Swiss President Eveline Widmer-Schlump တွေ့ဆုံ
ရခိုင်မှာ အကြမ်းဖက်မီးရိူ့သူတွေကို တကယ်ဖမ်းနေပါပြီတဲ့.....
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် အများပြည်သူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှီခိုအားထားရာ မြို့မဈေးအား ဘင်္ဂလီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ စေခိုင်းချက်အရ မီးရှို့ဖျက်ဆီးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးလေးဦးအား ဓာတ်ဆီ ၃ဂါလံဖြင့် ၁၂.၆.၂၀၁၂ နေ့တွင် မြို့ခံများလက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့သည်။ အဆိုပါဘင်္ဂလီများကို ကျောက်တော်မြို့ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးအပ်နှံခဲ့သော်လည်း ရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူများက ကျောက်တော်မြို့ ရှိစစ်တပ် တပ်မမှူးအမိန့်ကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာအရေးယူမှုမရှိပဲ နာရီပိုင်းအတွင်း၎င်းတို့နေထိုင်ရာ ပိုက်သည်ရပ်သို့ လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ကျောက်တော်မြို့ခံတစ်ဦးမှ ဖုန်းဆက်ပြောကြားလာပါသည်။ ထို့အပြင် ၁၃.၆.၂၀၁၂ နေ့တွင် စက်လှေပေါ်တွင် ဓာတ်ဆီပုံးများတင်ဆောင်လာပြီး ဈေးဆိပ်မှဆိုက်ကပ်ကာ ဆိပ်ကမ်းရှိအဆောက်အအုံများကို မီးရှို့ရန်ကြိုးပမ်းသော ဘင်္ဂလီလူမျိုးနှစ်ဦးကိုလည်း အဆိုပါတပ်မမှူး၏အမိန့်ဖြင့် ထပ်မံလွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ကျောက်တော်မြို့ခံများမှ အဆိုပါတပ်မမှူးအား မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ လေးဝတီ လွတ်လပ်သော ရခိုင်သတင်းဌာန
နေမျိုး | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၃ မိနစ်
မသီတာထွေး ကို အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟု ယူဆသူ သုံးဦး အား ဖမ်းဆီးထားခြင်းအကြောင်း ပါဝင်သည့် ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တစောင်ကို ဖတ်ရှုနေသည့် အမျိုးသမီးတဦးကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ- ရဲမင်း၊ မဇ္ဈိမ)
Daw Aung San Suu Kyi Pressconference
ဘင်္ဂလီကိစ္စအမေစုဖြေတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မှာလာဒ်စားတဲ့သူတွေအရေးယူခံရတဲ့အချိန်။ ဟိုဘူးသီးတောင်မှာတာဝန်ယူတဲ့ဗိုလ်မှုးချူပ်..သိန်းသောင်းချီချမ်းသာသွားတာလေးကိစ္စ.... လုပ်ပါအုံး..အခုမှဈေးကျသွားတာ..အရင်ကဘင်္ဂလီတယောက်၃၀ကနေ၁၀၀ကြားမှတ်ပုံတင်ရအပြီးဈေးပေါက်တယ်။
Aung San Suu Kyi Press Conf ENGLISH end BURMESE by dvbradio Aung San Suu Kyi Press Conf ENGLISH end BURMESE
လေဒီရှူး နဲ့ အမေစု
ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္ဂလီ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ Jamaat-e-Islam က လက်နက်များ တပ်ဆင်ပေး
ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္ဂလီ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ Jamaat-e-Islam က လက်နက်များ တပ်ဆင်ပေးကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောပြီ။
on Wednesday, June 13, 2012 at 5:31pm ·
(ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာဟာ ဘယ်လောက်ကြီးမားနိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ အဆက်ပါ၊ ပထမပိုင်း မဖတ်ရသေးရင် http://on.fb.me/LVJAQp မှာဖတ်လို့ရပါတယ်။
သမိုင်းအထောက်အထားတွေနဲ့ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ကျမတို့အနေနဲ့ လ၀ကနဲ့ နစက တွေအပေါ်မှာပဲ အပြစ်ပုံချနေကြတာ အလုံးစုံ မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာလည်း တွေ့မြင်လာရပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)) နှင့် ဆွေးနွေးမှုများအရ နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်ဂါလီများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် နေထိုင်ရန်ပြန်လည်လက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ ဘင်္ဂါလီများက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၈၈ အရေးအခင်းမတိုင်ခင် ရိုဟင်၈ျာ အကြမ်းဖက်ခြင်း
အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရာမ၀င်း ၀င်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိုသောကြောင့် စစ်ဆင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ၁၉၉၁ ခုနှစ်စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီ စုစုပေါင်း ၂၅၀၀၀၀ (၂သိန်းခွဲ)ခန့် ထွက်ပြေးသွားရကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးကြောင့် ထွက်ပြေးသွားသော ဘင်္ဂါလီတွေကို ကမ္ဘာက သနားစရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး မြန်မာအစိုးရအား အာဆီယံနိုင်ငံများအဖွဲ့မှ မူဆလင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမူဆလင်နိုင်ငံများ ၊ မကာအခြေစိုက် မူဆလင်အဖွဲ့အစည်း (Rabita-al-Alam-I-Islami (Muslim World League)) တို့ရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဖိအားပေးမှုများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနမှတ်တမ်း၊မော်ကွန်းဌာနမှ မှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
အဆိုပါဖိအားပေးမှုများကြောင့် အစိုးရ အနေဖြင့် ထွက်ပြေးသွားသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီ ၂သိန်းခွဲခန့်ကို ပြန်လည်လက်ခံခဲ့ရပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ် မှာ ရခိုင်ပြည်တွင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်ခွင့် ပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနမှတ်တမ်း၊မော်ကွန်းဌာနမှ မှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရေး လှုပ်ရှားမှု
ထို့နောက်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာတို့အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာခဲ့တာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
............................................................ DVB News Mirror and Rhythm
by May Thingyan Hein on Thursday, June 14, 2012 at 4:24am · May Thingyan Hein(Myitmakha)
တို့လူမျိုးများ နိုးကြားလို့ အိန္ဒိယကဲ့သို့ စည်းရိ...
အခြေအနေအေးချမ်းစေပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ဟု...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ Swiss President Eveline Wid...
မသီတာထွေးအမှု စွပ်စွဲခံရသူများ တမှု ဝန်ခံ၊ နှစ်မှု ငြ...
ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္ဂလီ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ ...